Currant | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Ny fomba famokarana ny mainty mainty
Ny Currant dia akoram-boanjo matsiro, mamy sy salama miaraka amin'ny fofona mahavelona. Misy olona maro tia an'io toaka io, ary ilaina ny manatrika tsara ny kirihitra mialoha. Ny voankazo faran'izay be karazan-kazo dia manomboka amin'ny fahefatra ka hatramin'ny valo ambinifolo aina, aorian'io fotoana hanamboarana ny kirihitra.
Ahoana no hambolena sy hikarakarana ny mainty hoditra
Inona no ilàna ny mainty mainty? Ny renirano mainty dia heverina ho iray amin'ireo voankazo tena mahasoa indrindra. Ny mainty hoditra dia ampiasaina amin'ny fanafody, ny sakafo. Ampiasaina mba hisorohana ny aretina sasany. Ny renirano mainty dia manome ny vatan'olombelona amin'ny karazana vitamina (A, vitamin an'ny E, B, C, H), microelements (fluorine, iron, iodine, varahina, cobalt, zinc, manganese), macrocells (calcium, potassium, phosphorus, calcium).
Nanjary mahazatra antsika izany amin'ny fahavaratra mba hanangonana ny voankazo mainty sy ny voankazo mena. Ireo karazany roa ireo dia efa niorim-paka tao amin'ny faritra misy anay. Saingy vitsy no mahafantatra momba ny karazan'io alimo io - rindrina volamena, ny faharoa no "krandal". Any Amerika Avaratra dia heverina fa toerana nahaterahan'io karazam-bary io, izay any amin'ny faritra eo avaratra andrefana sy Meksika dia mitombo tsy misy indostrialy ireo kirihitra, tsy misy fanampiana olombelona.
Ahoana no fomba hitondran'ny currants amin'ny aretina
Currant dia ahitra iray izay afaka hahatratra haingana 2,5 m. Ny ravinkazo dia manana nify lehibe eo amin'ny sisiny, ny voankazo dia mahatratra hatramin'ny 1 cm ny diamondra ary manana fofona mahery vaika. Afaka mitombo ao anaty alokaloka ny coriander, fa ny toerana tsara kokoa dia ny tany ao amin'ny faritra maitso sy mazava. Ny voaniho currant dia misy vitaminina, asidika organika, micro-ary macronutrients.
Ahoana ny fomba hiarovana ireo amboara avy amin'ny bibikely
Miarahaba ireo tia ny zaridaina izahay! Ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny bibikely manimba. Hilaza aminareo momba ny inona ny bibikely rehetra, ny habetsaky ny fahasimbana azony atao amin'ny kirihitr'akondroo sy ny fomba hiadiana amin'izany. Fantatrao ve? Ny jiro mainty dia ampiasaina hanomanana karazan-tsakafo.
Fitsipika sy toro-hevitra vitsivitsy momba ny fikarakarana ny fotsy hoditra
Androany dia hiresaka momba ny fotsy hoditra isika. Hambaranay aminao ny fomba hambolena karavato fotsy amin'ny lohataona, misafidy toerana hambolena sy mety. Rehefa avy mamaky ity lahatsoratra ity ianao, dia hanana fahalalana ampy hitombo kokoa ny moron-tsira sy ny voankazo. Fantatrao ve? Currant dia manondro ny lamin'ny Camouflaged.
Mainty mainty: mamboly, maniry izahay, mijinja
Azo jerena ao amin'ny ankamaroan'ny zaridaina ny koronantsary, satria be mpahalala be izany. Io renirano mainty io no malaza indrindra amin'ny hafa rehetra (mena sy volamena). Ny renirano mainty dia manan-karena amin'ny vitamina ary mihoatra ny inhimailatra ny voankazo ao anaty voankazo, voankazo voan'ny voankazo ao amin'ny avo 8 heny, paoma sy bitsika in-10, ary voaloboka efa ho in-jato.
Fomba entina manala ny sombin-tsolika amin'ny kirany
Ny Currant dia iray amin'ireo karazan-kazo mahazatra indrindra amin'ny latabay. Mpamboly sangisangy noho ny tsy fisian'ny fieritreretana eo amin'ny fikarakarana, vovobony, zavamaniry mamy sy tsaramaso marevaka, manan-karena amin'ny vitamina sy microelements. Ho an'ny fambolena voajanahary dia tokony hazava tsara ny fomba hiatrehana ny lalan-kely amin'ny koray - voka-dratsy mahazatra.
Ahoana no hiarovana ny moron-dranomasina amin'ny aretina sy ny bibikely
Saika ny mpamboly sy ny tompon-tany no mampitombo ny fambolena. Ao anatin'ireo faritra matetika dia mihaona amin'ny mainty hoditra (Ribes nigrum) isika, mena (Ribes rubrum) ary vatomamy fotsy (Ribes niveum), ary lasa malaza ny renirano mavo. Ny aretim-bolo sy ny fitsaboana Raha tianao ny hamenanao ny kirihitr'ao amin'ny voankazo isan-taona, dia tokony ho fantatrao ihany koa ny fahasamihafan'ny fikarakarana, fa koa ny koray sy ny bibikely.
Karakarao ny moron-katsaka amin'ny lohataona: manapaka, mamahana, miaro amin'ny aretina sy ny bibikely
Ny mainty hoditra mena sy mena ary fotsy dia fotsy malaza eo amin'ny latabatintsika, noho izany, maro ireo mpilatsaka an-tsaha no liana amin'ny fikarakarana karakaraina aorian'ny ririnina. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny firoborobon'ny fisakanana, fikarakarana, fidiovana ary fanodinana avy amin'ireo bibikely misy ireo zavamaniry ireo, ary koa mitoetra amin'ny olana mikasika ny fiarovana ny kirihitra amin'ny angovo azo avy amin'ny lohataona.
Ny fomba hikarakarana ny moron-dranomasina amin'ny fahalavoana, izay ahitana ny fikarakarana ny lohataona
Ny Currant dia iray amin'ireo karazan-tsakafo matsiro sy mahasalama, mikarakara karazan-kazo izay azon'ny mpamboly rehetra atao ary ilaina amin'ny fararano. Ny fampiharana azy dia azo jerena ao amin'ny sakafo sy ny fitsaboana. Amin'ny tranga voalohany, voangom-boankazo ny sompitra sy ny menaka, mandoko vaovao, ary ny ravinkazo dia ampiasaina mba hitehirizana, ary ireo teokan-tehezana no mivoaka avy amin'izy ireo.
Noho ny fikarakarana ny moron-drano amin'ny lohataona: torohevitra zaridaina
Ny Currant dia fambolena iray tsy misy pentina tsara indrindra, mamokatra be dia be izay mahavelona ny voankazo hafa mba hanandrana sy hamandoana ny zavatra ilaina. Ny hasarobidiny manokana dia amin'ny fomba tsy maontina. Fa mbola ho an'ny voankazo lehibe sy lehibe, ilaina ny manome ny mpikatroka fanampiny ho an'ny fitombo isan-taona. Noho izany, ny mpikarakara zaridaina dia mamelona ny karaoty amin'ny lohataona sy mandritra ny vanim-potoana.
Ny atao hoe kôlônianina mena: ny fananana medikaly sy ny fanoherana
Tsy dia mahazatra ny cluster misy tsiranoka maitso maitso mena ao amin'ny faritra misy anay. Afaka hita any amin'ny tokotany tsirairay izy ireo. Ary ny antony rehetra dia satria ireo karazam-boninkazo manjavozavo dia manana hery manasitrana vitaminina sy mineraly iray manontolo. Na ny razambentsika aza dia niantso ny voany mena midorehitra, loharanon'ny hatsaran-tarehy, tanjaka ary faharetana.
Inona no ilaina mainty hoditra: fanasitranana sy ny fanoherana
Ny fofona amin'ny kirihitr'ala dia tsy azo hamaivanina amin'ny zavatra hafa. Rehefa mahatsapa izany ianao eo amin'ny fiainanao dia hahatsiaro izany mandrakizay. Berries, ravina, ravinkazo - ny rehetra dia mihosotra amin'ny fofony. Noho izany, ao Rosia, io voankazo io dia efa nopetahana anarana hoe "currant" (ao amin'ny fiangonana Slovène taloha, "fofona mahery"). Ankoatra ny fofom-paty, dia malaza amin'ny toetra manokana miavaka izy io.
Fotsy fotsy: ny votoatin'ny kaloria, ny singa, ny toetra mahasoa sy ny fanoherana
Ny Currant dia mifandray amin'ny karazany roa lehibe - mainty sy mena. Ny voalohany, araka ny fantatrao, dia misy zavatra mahasoa kokoa, fa kosa mifandraika amin'ny tsiro mahafinaritra ny fialan-tsasatra tsirairay. Ny karazana fotsy dia karazana zavamaniry tsy dia fahita firy, ary, noho ny vidiny, dia tsy midika akory izany ny "relative" mena.
Famokarana malaza amin'ny famokarana divay mainty mainty ao an-trano
Ny divay tsara indrindra - vita amin'ny tanany. Ny iray amin'ireo voankazo malaza amin'ny fanaovana zava-pisotro dia mainty mainty. Rehefa avy mamaky ilay lahatsoratra ianao, dia hianatra ny fomba hanamboarana divay mainty misy ravina. Ny voankazo mainty hoditra: Lisitry ny ravina Manamboatra zava-pisotro misy alikaola ny zava-pisotro misy alikaola.
Ny fomba hiatrehana ny vilia solomaso eo amin'ny rindrina
Ny haran-dranomasina dia iray amin'ireo aretina mahazatra sy mampidi-doza indrindra amin'ny karazan-kazo sy ny zezika. Famaritana, fandinihana, fitsaboana - dia holazainay momba izany etsy ambany. Ny loza ateraky ny harafesina Manomboka mihintsy ny ravina ny zavamaniry malemy, miharatsy ny hatsaran-tarehy, ary mihena ny fanamafisana ny hafanana. Ao amin'ny fikorontanan'ny metabolika no manelingelina, ny photosynthesis, ny fatiantoka dia nanjavona, ny fitomboan'ny fitomboan'ny rano.
Ahoana no hanapahana ny moron-dranomasina?
Raha tsy manameloka ny taona, dia tsy afaka hampiasa ny voka-dratsiny be dia be ny katsaka. Ary ny zava-drehetra satria ny voankazo dia mifamatotra amin'ny sampana fandrosoana tamin'ny herintaona, izay tsy mihoatra ny 5 taona. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanesorana ireo antitra efa maina, maina, simba, mifaninana amin'ny tsirairay ary manelingelina ny fitomboan'ny singa vaovao.
Ireo toro-hevitra lehibe momba ny fikarakarana sy ny fambolena karazam-borona "mahery"
Ny karazam-bozaka mainty "Yadrenaya" dia fantatra nandritra ny 30 taona mahery. Natolotr'ireo mpamboly Altai, dia nanambara avy hatrany ny karazany noho ny fanoherany ny hatsiaka, ny fikarakarana tsara ary ny be dia be (izany no iray amin'ireo "goavy" voalohany ao amin'ny tontolo mihetsiketsika). Ny Currant "Yadrenaya" dia mbola malaza amin'ny zaridaina.
Ny fifehezana matevina manify ho an'ny koray
Mealy dew (amin'ny teny hafa, ny lavenona na ny lavenona) dia aretina azo avy amin'ny fôlôkôma izay miaina ao anaty tany - ny filahatry ny erysipelas na erysiphoid. Currant dia mijaly noho ity holatra ity. Ny tavy Mealy dia misy fiantraikany amin'ny ampahany amin'ny zavamaniry izay ambonin'ny tany - ny ravina, ny petioles, ny tsimok'aretina, ny zana-ketsa ary ny tifitra amin'ity taona ity, ary koa ny teboka maniry.
Maniry ny moron-katsaka sy saplings izahay
Ny riandrano dia karazam-boankazo avy amin'ny fianakaviana gooseberry. Ny dingan'ny fambolena sy fiahiana ny voankazo dia mitaky fahalalana sy fahaizana sasany. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny fomba famolahana ny moron-drano amin'ny lohataona isika, ary koa manolora dingana arahina amin'ny hetsika. Rahoviana vao hamboly Ny fararano dia ny fotoana tsara indrindra hambolena ny moron-dranomasina, satria ny ririnina amin'ny ririnina dia mihareraka sy mihamangatsiaka amin'ny ririnina, izay manampy amin'ny famolavolana tsaramaso.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Currant